सरकारको नैतिकता ढल्यो ?
कपिलवस्तुको पिपरा सीमा क्ष्ँेत्रमा जंगे पिलरको यो हालत छ । यो सीमा स्तम्भ ढलेको हो कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अपनाएको सार्वभौमिकता ढलेको हो । बुझ्नेका लागि यो देश ढलेको हो । देश यसरी ढलेर बेवारिसे हुँदा सरकारले मसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर नाक फुलाउनु आफैमा नाङ्गोपन हो । जिम्मेवार सरकारका लागि देशको सीमास्तम्भ यसरी ढल्नु भनेको त्योभन्दा गैरजिम्मेवार सरकार अरु कुन हुन सक्ला ? नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो यो ।
जुन सरकारले देशको सम्मान गर्न सक्दैन, देशलाई शीरमा बोक्न सक्दैन, त्यस्तो सरकारलाई के सरकार भन्नु ? ओली सरकारले सीमा स्तम्भ यसरी ढलेको नदेख्नु भनेको यो सरकार राष्ट्रघातक सरकार हो भन्नुपर्छ ।
यसरी सीमा स्तम्भ ढलेपछि सरकारले सबै काम छाडेर तत्काल सीमा स्तम्भ दुरुस्त राख्न र सीमाप्रति बढी चासो देखाउनु पर्ने हो । ओली सरकारले सीमा अतिक्रमण भइरहदा चुँइक्क बोलेको छैन, सीमा स्तम्भ यसरी ढल्दासमेत बेवास्ता गरिरहेको छ । यस्तो सरकारलाई के सरकार भन्नु र ?
देशको सीमा के हो, त्यो प्यालेस्टाइनलाई सोध्नुपर्छ । माटोको महिमा कस्तो हुन्छ, इजरायललाई सोध्नुपर्छ । अझ देश गुमाइसकेको सिक्किमेलीहरु यतिबेला रगतको आँसु रोएर देश खोजिरहेका छन्, सार्वभौमिक परिचयका लागि तड्पिरहेका छन्, त्यतातिरबाट समेत ओली सरकारले ज्ञान लिन सकेन ।
देश बचाउन गाह्रो छ । देश सिध्याउनतिरमात्र लागेको ओली सरकारलाइृ देशको महिमा सुनाउनु र भैंसीलाई बिन बजाउनु उस्तै लाग्छ । त्यसकारण देशको चिन्ता अव आमनागरिकले लिनुपर्छ, नागरिक जागरुक हुनुपर्छ ।